3 Maalin ayaa ka hartay doorashada, xagee maraysaa taageerada xisbiyada? | Somaliska
Iyado doorashada Sweden ay naga xigto sadex maalmood oo keliya ayaa maanta waxaa soo baxday afti ururin cusub oo ay samaysay shirkada SIFO. Taasoo muujinaysa in taageerada xisbiga Socialdemokraterna (S) iyo Centerpartiet (C) ay kor u kacday maalmihi la soo dhaafay.
Taageerada xisbiga S ayaa maraysa 30,4 halka xisbiga Centerpartiet ay heleen 7 taasoo ah kor u kac weyn. Xisbiga Miljöpartiet ayaa isagu noqonaya xisbiga sadexaad ee ugu weyn wadanka iyagoo helay 10,3. Taageerada xisbiga cunsuriga ah ee SD ayaa hoos u dhacday oo hada maraysa 8,9. Xisbiga bidixda ee Vänsterpartiet (V) ayaa helay 6,8, halka xisbiga talada wadanka haya ee Moderaterna (M) ay heleen 22.6%.
Dhinaca kale, Ekot ayaa soo bandhigtay in sadex meelood hal meel dadka aysan wali go’aansan cida ay u codeynayaan, qaasatan dhalinyarada in sadex meelood labo meel aysan wali aqoon cida ay u codeynayaan, taasoo isbedal weyn ku keeni karta natiijada doorashada.
ok kuwaan ayaaba u koreya miyaa